Ulibale iphasiwedi ye-Outlook. U-Lost Iphasiwedi ye-Outlook. Ukubuyiswa kwegama eligqithisiweyo le-Outlook.
Ikhaya iimveliso DataNumen Outlook Repair Khohlwa okanye uphulukane negama eligqithisiweyo kwifayile yePST efihliweyo.
Ulibale okanye Ulahle igama lokugqitha? DataNumen Outlook Repair Unganceda!
Ukukhuselwa kwephasiwedi ye-Outlook:
Xa usenza ifayile entsha yeFolders Folders (PST) kwi-Outlook, ungayifihla ngegama eligqithisiweyo ngokukhetha:
Kukho izicwangciso ezintathu zofihlo:
Akukho Guqulelo. Oku kuthetha ukuba awuyifihli ifayile.
Encryption ehambelanayo. Olu luseto olungagqibekanga.
Encryption ephezulu (ye-Outlook 2003 kunye neenguqulelo eziphezulu) okanye ebizwa ngokuba yi-Encryption eNgcono (ye-Outlook 2002 kunye neenguqulelo ezisezantsi). Olu seto lune most khu seleko.
Ukuba ukhetha uguqulelo oluntsonkothileyo oluntsonkothileyo okanye oluntsonkothileyo oluphezulu (olona bhalo lungcono), kwaye usete igama eligqithisiweyo apha ngezantsi, ifayile yakho ye-PST iya kukhuselwa ngala password.
Emva kwexesha xa uzama ukuvula okanye ukulayisha ifayile yePST nge-Outlook, uya kucelwa ukuba ufake ipassword kuyo:
Ukuba uyalibala okanye uphulukane negama eligqithisiweyo, okanye awuyazi iphasiwedi, awunakufikelela kwifayile ye-PST, kunye nazo zonke ii-imeyile kunye nezinye izinto ezigcinwe kuyo, ngaphandle kokuba usebenzisa imveliso yethu DataNumen Outlook Repair, enokusombulula ingxaki njengomoya opholileyo, ngolu hlobo lulandelayo:
Khetha i-encrypted Outlook PST file njenge fayile yePST ekufuneka ilungisiwe.
Lungisa ifayile ye-Outlook PST efihliweyo. DataNumen Outlook Repair iya kubhala idatha kwifayile ye-PST ebhalwe ngokufihlakeleyo, emva koko ihambise idatha ebhaliweyo kwifayile yePST emiselweyo.
Emva kwenkqubo yokulungisa, ungasebenzisa i-Outlook ukuvula ifayile yePST yefayile, akukho phasiwedi iya kuphinda ifunwe.
Isampulu yefayile yePST efakwe kwi-password elityelweyo. Umboniso_enc.pst
Ifayile ifunyenwe ngu DataNumen Outlook Repair, engafuneki iphasiwedi kwakhona: I-Outlook_enc_fixed.pst